Tika Lamsal | Bhutan News Service
Home Authors Posts by Tika Lamsal
Tika Lamsal -
तिमी नआउनू September 12, 2021
रमेश गौतम नर्वे तिमी र म कुनै समय एक-अर्काका पर्याय थियौँ; आज तिम्रो र मेरो यात्रा दुई समानान्तर रेखा ! आजको यो पृथकता – तिम्रो र मेरो पृथक् सैद्धान्तिक मान्यता आफैँमा महान् हुन सक्छ। म बाँचेको संसार मेरो परिभाषामा बाँधिदा तिम्रो परिभाषाले मेरो समय बाँध्दैन; मेरो परिभाषाले तिम्रो समय बुझ्दैन। म चाहन्छु मेरो सैद्धान्तिक मान्यता […]
सङ्कट – धर्म September 12, 2021
डिल्लीराम रेग्मी ओहायो, अमेरिका यो संसारमा सङ्कट नआएको या नभएको कहिले छ र? सत्ययुग देखि नै सङ्कट संसारमा भरपुर छ। अहिले पनि छ र रहिरहने छ। सही भन्ने हो भने सङ्कट कहीँ कतैबाट कहिल्यै आउँदैन र जाँदैन यो संसार नै आफैमा सङ्कट हो हामीले यससँग लड्ने साहस मात्र गर्न सक्नु पर्छ। जब जब धर्तीमा सङ्कट […]
उठौँ स्वतन्त्रता लिन September 12, 2021
कुबिर शर्मा भुवानेटारे मासाचुसेट्स, अमेरिका निशब्द मौन देशका प्रजा रए थुना भरी घमण्ड गर्छ शक्ति त्यो लगाम खिच्छ बेसरी लगाम हातमा लिदै स्वतन्त्र घोसणा भयो निसान भाष्य भेषको सखाप गर्न खट्छ त्यो दिवाल त्रासको खडा गरेर हर्ष बेच्दछन् डरेर देशका प्रजा मरेर कष्ट खेप्दछन् विपक्ष बोल्न देशको सिमा भरी निषेध छ स्वराज देश भक्तिको सुशब्द […]
बलात्कृत सपना September 12, 2021
रुप पोखरेल पेन्सिलभेनिया,अमेरिका आजभन्दा अघि म धेरैजनाको मलाम गएको छु । शोकाकुल परिवारलाई भेट्ता वा देख्ता मन खल्लो हुनुलाई स्वभाविक ठान्थें । तर, आज समाजका एक अग्रज ९३ वर्षीय फूँयल बा’को मलामी भएर पार्थिव शरीरमा एउटा फुलको गुच्छा अर्पण गर्दैगर्दा मनमा औधी नै कुरा खेले । फुयँल बा’ र मेरा स्वर्गीय बाबा एकै उमेरका अनि […]
Rup N Pokhrel
गजल -५०३ September 12, 2021
अनन्त आचार्य अस्ट्रेलीय सम्हाल्न खोज्छु मुटुको पिर देखियो यसरी। सजाउन नपाई मायाको झिर देखियो यसरी। राखेको थिएँ माया को फूल मुर्झायो हेरन। बोकेको थिएँ प्रेमको भिर देखियो यसरी। आँखामा सागर बगेर आयो के गर्नु मैले। मायालु भनी कसेको धीर देखियो यसरी। मायालु डोरी जल्दैछ हेर पोल्दछ भत्भति। सपनाभित्र बनेको खिर देखियो यसरी। आएर बस अनन्तसँग […]